पिस्टन को छल्ले - एउटा सानो खाली संग घन्टी, बन्द छैन। तिनीहरूले (जस्तै पिस्टन इन्जिन को सबै प्रकार मा पिस्टन को बाहिरी पर्खाल मा grooves छन् बाफ इन्जिन , वा आन्तरिक दहन इन्जिन)।
पिस्टन छल्ले के हुन्?
1 दहन कोठामा मुहर गर्न। सङ्कुचन छल्ले निकै संपीडन वृद्धि। zalegshimi संग, भाँचिएको वा थकित छल्ले इन्जिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वा शक्ति गुमाउन।
2. सिलेंडर पर्खाल गर्मी स्थानान्तरण सुधार गर्न। छल्ले जसबाट तात्दै रोकन, पिस्टन देखि आन्तरिक दहन इन्जिन गर्मी तिरस्कार योगदान।
3. कम गर्न तेल खपत इन्जिन लागि (मा दुई-स्ट्रोक डिजेल र सबै चार स्ट्रोक आन्तरिक दहन इन्जिन)।
पिस्टन छल्ले कसरी?
संयुक्त (पनि ताला) पिस्टन रिंग को अन्त्य बीच स्थित छ। पिस्टन को सिलेंडर लक हुँदा अलिकति संकुचित छ - एक मिलिमिटर केही अंश गर्न। अप्रत्यक्ष (चार-स्ट्रोक आन्तरिक दहन इन्जिन मा) र एक सीधा लाइन छ। (- 180 डिग्री, छल्ले3- 120 डिग्री2छल्ले) जोडहरुको बीच कोण बराबर थियो यस्तो तरिकाले disposed grooves स्थित छल्ले। परिणाम सफलता ग्याँस कम एक labyrinth छ।
छल्ले खुरचनी र सङ्कुचन हो। खुरचनी को crankcase तेल मा मर्मज्ञ देखि दहन कोठामा सुरक्षित। तिनीहरूले सिलेंडर देखि अतिरिक्त इन्जिन तेल हटाउन। माउन्ट खुरचनी छल्ले तल सङ्कुचन। तिनीहरूले स्लट मार्फत छ। दुई-स्ट्रोक पेट्रोल आन्तरिक दहन इन्जिन वाल्व स्टेम इन्धन साथ सँगै combusted छ इन्जिन गर्न तेल रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अब उत्पादन वा फलाम, इस्पात वा पानीका मुहानहरू को रूप मा extenders एक समग्र घन्टी डाली। उत्पादन, त्यसैले तिनीहरू धेरै साधारण कास्ट भन्दा हुन् सजिलो र कम खर्चिलो अंश।
सङ्कुचन पिस्टन छल्ले दहन कोठामा देखि ग्याँस को gusts देखि crankcase सुरक्षा। को घन्टी बाहिरी भित्री ठूलो व्यास को नि: शुल्क अवस्थामा। यस कारण, उत्पादन भाग कटौती गरिएको छ। कट महल भनिन्छ ठाँउ। सामान्यतया एक पिस्टन पिस्टन को compaction को डिग्री अलिकति वृद्धि भएको छ कि कारण र घर्षण हानि बढ्छ लागि, यस्तो छल्ले तीन भन्दा बढी छैन सेट गरिएको छ। दुई-स्ट्रोक आन्तरिक दहन इन्जिन मा सामान्यतया दुई छल्ले माउन्ट छ। सङ्कुचन छल्ले को बहुमत को पार खण्ड आकार मा आयताकार छ। किनारा tapered वा सिलिण्डर प्रोफाइल छ जो एक बाँसुरी छ। जब आन्तरिक दहन इन्जिन छल्ले चलिरहेको-मा सुविधा केही हदसम्म (यो एक नाली मा एक अवकास प्रदान गर्दछ) गर्न मुड छन्।
पिस्टन छल्ले को उत्पादन
प्रविधि र बनाउने तरिका निःशुल्क अवस्थामा छ जो उत्पादन को आकार, आफ्नो काम अवस्थामा दबाव को इच्छित स्तर सिर्जना भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पिस्टन रिंग सामान्यतया, नमनीय डाली फलाम बनेको छ यो राम्रो लोच स्थिर प्रदर्शन र स्थायित्व, उच्च घर्षण प्रतिरोध, उत्कृष्ट विरोधी घर्षण गुण छ देखि। पनि प्रयोग dopants (को प्लाज्मा जेट छिडकाव मा porous क्रोमियम, मोलिब्डेनम cladding को विशेष कोटिंग, चीनी माटो कोटिंग, हीरा कणहरु), निकै उत्पादनहरु को गर्मी स्थिरता बढ्छ जो।
Tubeless टायर र आफ्नो मुख्य लाभ
महान् चेरोकी, समीक्षा र सुविधाहरू
तातो hatchback को अवलोकन "ओपल Astra OPS"
ट्युनिङ "ओडी 100,45" शारीरिक: फोटो
संकुचित hatchback "निसान टिप्पणी,": प्राविधिक विनिर्देशों र वाहन को दोस्रो पुस्ता को डिजाइन
सुन्दर सजाउनु कसरी Aspic? aspic, माछा, कुखुरा वा मासु मा जिब्रो (फोटो) कसरी सजाउनु गर्न
Meadow - को Leningrad र नोभगोरोड क्षेत्रहरु मा नदी
वयस्कहरूको लागि स्कूटर - ठूलो शहर प्रभाव
को परम्परा को मूल। जो हात महिलाहरु हेर्न हो
युरोपेली र स्थानीय कलाकारहरूको पुरातन चित्रकारी
जीवनी Margarity Terehovoy, परमेश्वरको अभिनेत्री
Beagle Hound: नस्ल विवरण